အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း | Ministry of Planning and Finance
၁။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို ၁၉၈၈ ခုနှစ် နောက်ပိုင်း တွင် စတင်ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး ၂၀၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ခေတ်မီဖွံဖြိုးတိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းဖြစ်စဉ် နှင့်အတူ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမူဘောင် (Framework for Economic & Social Reform) ကိုချမှတ်ပြီး နိုင်ငံအတွင်းပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဧရိယာ(၁၀)ခုကို သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (Tax Reform) သည် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ထို့ပြင် World Bank နှင့် Development Partner များမှ ကမကထပြုသည့် Public Financial Management Reform Strategy ၏အစီအစဉ်ဖြင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒနှင့် အခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ် (Tax Policy & Tax Administration Reform) ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၄။ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အခွန်ကောက်ခံမှု (Tax) နှင့် GDP အချိုးမြင့်တက်လာစေရန်နှင့် ခေတ်မီအခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အဓိကရည်ရွယ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်မှုအတွက် ထိရောက်စွာ အထောက်အပံ့ပြုနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
Tax နှင့် GDP အချိုး
၅။ Tax-to-GDP ratio ၃% မှ ၅% အတွင်းသာရှိနေခဲ့ပြီး ASEAN နိုင်ငံများအတွင်းမှာပင် အနိမ့်ဆုံးအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက် အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်နေသည့် အနေအထားလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတွင် Tax-to-GDP ratio ကို (၁၅%)ကျော် အထိရောက်ရှိနိုင်ရန် ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၆။ ခေတ်မီအခွန်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်တွင် အခွန်ရုံးမှစည်းကြပ်သည့်စနစ် (OAS)မှ အခွန်ထမ်း ကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြပ်သည့်စနစ် (SAS) သို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခြင်း၊ အခွန်မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများကို ခေတ်စနစ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၇။ ၂၀၁၁ခုနှစ်မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ၏အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုအခြေအနေများကို လေ့လာပါက-
- အခွန်စနစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည် နိမ့်ကျလျက်ရှိခြင်း၊
- အခွန်ထမ်းများ၏ လိုက်နာမှု အားနည်းခြင်း၊
- အခွန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ ၊ ဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ခေတ်မမီခြင်းများကို တွေ့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
၈။ သို့အတွက် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် -
“ကျွန်ုပ်တို့ဌာနသည် အလွန်ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများကို ရိုးသား ဖြောင့်မတ်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ရမည်”
“ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာအခွန်ကို အမြင့်မားဆုံးရရှိစေရန်အတွက် စွမ်းရည်ပြည့်ဝသော ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းဖြင့် အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် နိုင်ငံ့သားကောင်းများပီပီ ဆန္ဒအလျောက် အခွန်ပေးဆောင်လာစေရေး” ဆိုသည့် လုပ်ငန်းတာဝန် (Mission) ကို ချမှတ်ဖော်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။
၉။ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (Strategic Reform Program) အရ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ-
(က) ဝန်ထမ်းရေးရာစီမံချက် (HR Reform)
( ခ ) မူဝါဒရေးရာစီမံချက် (Policy Reform)
( ဂ ) ဥပဒေရေးရာစီမံချက် (Legal Reform)
(ဃ) စီမံချက်ရေးဆွဲကြီးကြပ်ရေးစီမံချက် (DMD Reform)
( င ) အခွန်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်ရေးစီမံချက် (OMD Reform)
( စ ) သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်(ICT Reform)
(ဆ) အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (၁)ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက် (MTO (1) Reform)
- အထူးကုန်စည်ခွန် ( Specific Goods Tax ) ပြဋ္ဌာန်းခြင်း
- အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ(မူကြမ်း)( Tax Administration Law ) ရေးဆွဲခြင်း
- တန်ဖိုးထပ်ဖြည့်ခွန် ( Value Added Tax) ပြဋ္ဌာန်းခြင်း
- ရုံးချုပ်ဌာနခွဲများအားလုံးကို Functional Type သို့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း
အခွန်ထမ်းကြီးများ (Large Taxpayers)
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ (Medium Taxpayers)
အခွန်ထမ်းငယ်များ (Small Taxpayers)
- အခွန်ထမ်းအလွှာအလိုက် အခြေခံ၍ အခွန်ရုံးများကိုပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်း​
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးများ- MTO 1/2/3
အခွန်စည်းကြပ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များခေတ်မီအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်စည်းကြပ်သည့်စနစ် ( SAS System) ကိုစတင်ကျင့်သုံးခြင်း
- SAS စနစ်အား MTO ရုံးများတွင်ဆက်လက် ကျင့်သုံးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
- VAT စနစ်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးပြင်ဆင်ခြင်း
- Paper Based ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရာမှ IT နည်းပညာကိုတတ်နိုင်သမျှပိုမိုအသုံးပြုသည့်စနစ်သို့ပြောင်းလဲဆောင်ရွက်ခြင်း
- ဌာနတွင်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် IT နည်းပညာဖြင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- Mini Data Centre ဝယ်ယူတပ်ဆင်ပြီး နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ Integrated Tax Administration System ဖြင့် ပေါင်းစပ်ပြီး အခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်နေခြင်း
- အခွန်ထမ်းများမှ ကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြပ်နိုင်ရေး ပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- အခွန်စာရင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခွန်ထမ်းများ၏အချက်အလက်များ ရယူခြင်း
- လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း
-အခွန်ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု၊ ဥပဒေ ရေးရာ အထောက်အပံ့ဖြစ်မှုနှင့် ထိရောက်ကောင်းမွန်သော အငြင်းပွားမှုဆိုင်ရာ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများ ဖွံဖြိုးတိုးတက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
- အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးစီမံချက်ကို ဝန်ထမ်းများအားနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ဆွေးနွေးခြင်း
- ဝန်ထမ်းများ၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်စေရန် သင်တန်းများ၊ နည်းပညာအကူအညီရယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း
- လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး နိုင်ငံတကာအကြံပေးများထံမှ နည်းပညာဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်များရယူခြင်း
- ဝန်ထမ်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အထောက်အပံ့များပေးနိုင်ရေး နည်းလမ်းရှာဖွေ ဆောင်ရွက်ခြင်း
- အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း၊ တင်ပြခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းစနစ်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- ဌာနတွင်းစာရင်းစစ်ဆေးခြင်းများကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတကာအကူအညီများ ဖြစ်ကြသော International Monetary Fund (IMF)၊ US Treasury, Office of Technical Assistance (US, OTA)၊World Bank(WB)၊ JICA၊ ADB၊Norwegian Agency For Development Cooperation (Norad) တို့အနေဖြင့် ဘာသာရပ်အလိုက် နည်းပညာအကူအညီများထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဌာနေအကြံပေးများ ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်း၊ လိုအပ်သောသင်တန်းများပို့ချခြင်းနှင့် လိုအပ်သောရန်ပုံငွေ(ချေးငွေ/ ထောက်ပံ့ငွေ) များပံ့ပိုးပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး Large Taxpayer Office (LTO) တည်ထောင်ခြင်း
၁၁။ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလုပ်ငန်း၏ Pilot Project အနေဖြင့် အခွန်ထမ်းကြီးများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(Large Taxpayer Office) ကို အခွန်အများဆုံး ထမ်းဆောင်သော အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီ ကြီးများဖြင့် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၂။ LTO တည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ-
To introduce International Best Practice
- နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ပမာဏအများဆုံး ပေးဆောင်လျှက်ရှိသော အခွန်ထမ်းကြီးများအား
Focusing resources on majors contributors to government tax revenue
- ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသို့ ရှေ့ရှုသော နမူနာပုံစံပြ
- Model tax office towards modernized tax administration of Internal Revenue
၁၃။ LTO ၏ထူးခြားချက်များမှာ-
- အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ပထမဦးဆုံး လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဖြစ်ခြင်း၊
First pilot reform project to implement
- အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင်အခွန်စည်းကြပ်သောစနစ်ကို စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည့်ရုံးဖြစ်ခြင်း၊
First Office to introducing Self Assessment System (SAS)
- လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အခြေခံဖွဲ့စည်းထားသည့်ဌာနစုများဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်ရုံးဖြစ်ခြင်း၊
First Office using Functional Based system
၁၄။ SAS စနစ်တွင် အခွန်ထမ်းကြီးများ၏တာဝန်များ Taxpayers’ responsibility under SAS
- ကြေညာလွှာကို အသုံးပြု၍ ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို တွက်ချက်ခြင်း၊
Calculate the tax due using the tax return
- ကြေညာလွှာကို အချိန်မီ တင်သွင်းခြင်း၊
Timely fileatruthful tax return
- အခွန်ကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပေးသွင်းခြင်း၊
Pay the tax when due
- စာရင်းဇယားများ ထိန်းသိမ်းထားရှိခြင်း၊
၁၅။ LTO ၏၀န်ဆောင်မှုများ LTO’s services
- အခွန်ပညာပေး လုပ်ငန်းများ၊
Provide taxpayers education
- အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ၊
၁၆။ အကျိုးကျေးဇူးများ Benefits
- အခွန်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်လုံးဝ (သို့မဟုတ်) အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ လိုအပ်ခြင်း၊
Limited contact with or won’t hear from LTO.
- အခွန်ပေးဆောင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိကျသေချာမှုရှိခြင်း / အစီအစဉ် ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
Assist in tax planning.
- ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းချိန်တွင်ပင် စည်းကြပ်မှုပြီးမြောက်ခြင်း၊
Assessment is done at the time of filing.
- လိုက်နာဆောင်ရွက်ရသည့်အချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကို လျှော့ချနိုင်ခြင်း၊
Save taxpayer’s time and money.
- ပိုမိုကောင်းမွန်သော လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုကို ရရှိနိုင်ခြင်း၊
- အခွန်ဌာနနှင့် အခွန်ထမ်းတို့ကြား ယုံကြည်မှု ပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊
Improve trust between LTO and it taxpayers.
၁၇။ LTO ၏ ချဉ်းကပ်ပုံနည်းလမ်းအပေါ်အခြေခံ၍ အခွန်ပမာဏ များပြားစွာ ထမ်းဆောင်လျက် ရှိသော အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများကို အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ ထိရောက်စွာပံ့ပိုးနိုင်ရန်အတွက် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၁၈။ MTO(1) တည်ထောင်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ-
- နိုင်ငံတော်အတွက်အခွန်ပမာဏများပြားစွာ ပေးဆောင်လျှက်ရှိသော အလယ်အလတ်အခွန်
ထမ်းများအား အာရုံ စူးစိုက်ဆောင်ရွက်ရန်၊
Focusing resources on medium contributors to government tax revenue
၁၉။ MTO(1) ၏ထူးခြားချက်များမှာ-
- အခွန်ထမ်းကိုယ်တိုင် အခွန်စည်းကြပ်သောစနစ်ကို ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်မည့်ရုံး ဖြစ်ခြင်း၊
Office to introducing Self-Assessment System (SAS)
- လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အခြေခံဖွဲ့စည်းထားသည့် ဌာနစုများဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့်ရုံးဖြစ်ခြင်း၊
Office using Functional Based system
၂၀။ SAS စနစ်တွင် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ၏တာဝန်များ Taxpayers’ responsibility under SAS
- ကြေညာလွှာကို အချိန်မီတင်သွင်းခြင်း၊
၂၁။ MTO(1) ၏၀န်ဆောင်မှုများ MTO(1)’services
၂၂။ အကျိုးကျေးဇူးများ Benefits
- အခွန်ရုံးနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရန်လုံးဝ(သို့မဟုတ်)အကန့်အသတ်ဖြင့် သာလိုအပ်ခြင်း၊
Limited contact with or won’t hear from MTO(1).
- အခွန်ပေးဆောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိကျသေချာမှုရှိခြင်း/အစီအစဉ်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊
- အခွန်ဌာနနှင့်အခွန်ထမ်းတို့ကြား ယုံကြည်မှုပိုမိုတည်ဆောက်နိုင်ခြင်း၊
Improve trust between MTO(1) and it taxpayers.
၂၃။ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများနှင့်နှိုင်းယှဉ် ပါက အလွန်နိမ့်ကျလျက်ရှိသောအခွန်နှင့် GDP အချိုးကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည့် ခေတ်မီအခွန်ဌာနတစ်ရပ်ဖြစ်လာရန် ရည်မှန်းထားသည့်အားလျော်စွာ အခွန် ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအင်တိုက်အားတိုက်အရှိန်အဟုန်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခရီးရှည်ကို ချီတက်လျောက်လှမ်းရာတွင် အခွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဥပဒေများအား လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင်ငံကြီးသားပီသသည့်အခွန်ထမ်းများ ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်သော ခေတ်မီအခွန်စနစ်ကို ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။